La xiriir Guddiga Dugsiga | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Adiga oo ah wakiillada aad dooratay, xubnaha Guddiga Dugsiga waxay soo dhaweynayaan su'aalaha iyo wadahadallada la xiriira maamulidda Degmada. Xubnaha guddiga ayaa si firfircoon uga qaybqaata meelo badan oo bulshada ah, ka qayb galka shirarka golaha latalinta, u adeega guddiyada iyo ka qaybgalka shirarka dugsiga iyo bulshada iyo dhacdooyinka. Xubnaha guddiga ayaa soo dhaweynaya casuumaadaha munaasabadahaaga waxayna ku dadaali doonaan inay ka soo qayb galaan.
Waxaa jira fursado rasmi ah iyo kuwa aan rasmi ahayn oo lagula xiriiro Gudiga Dugsiga guud ahaan, iyo sidoo kale xubnaha xubnaha Gudiga.
Aynu Wada Hadalno: Adeegso foomka Aynu Wadahadalno si aad u soo gudbiso su'aalaha, faallooyinka, soo-jeedimaha, walaacyada ama amaanta.
Email: Haddii aad rabto inaad la xiriirto Guddiga oo dhan, fadlan emayl u dir: schoolboard@minnetonkaschools.org . Dhammaan xubnaha Guddiga ayaa heli doona waraaqahaaga; Guddoomiyaha Guddiga ama Ku-xigeenku waxay ka jawaabaan emaylka iyaga oo ku hadlaya magaca Guddiga. Haddii aad rabto inaad la xiriirto shaqsiyaadka xubnaha Guddiga ah, cinwaannada emaylka ayaa lagu daabacay bogga Guddiga Dugsiga .
Taleefan: Mawduucyo aad u adag ama shucuur leh, wicitaan taleefan ama kulan fool-ka-fool ah ayaa laga yaabaa inuu waxtar badan yeesho. Lambarada taleefan ee xubnaha Guddiga waxaa lagu daabacay bogga Hogaanka Dugsiga .
Kulamada Shakhsiyeed: Degmooyinka raba inay la kulmaan shaqsiyaadka xubnaha Gudiga Dugsiga waxay diyaarin karaan inay sidaas sameeyaan iyagoo la xiriiraya shaqsiyaadka xubnaha ka ah.
Kulamada Dadweynaha: Guddigu wuxuu kulmaa ugu yaraan bille si uu ganacsi u qabto una siiyo fursado talooyinka dadweynaha. Waa kuwan xulashooyinka kala duwan ee shirarka dadweynaha:
Faallooyinka Dadweynaha ee Kulamada Joogtada ah
Faallooyinka Dadweynaha ee Kulamada Daraasada
Kulamada PTO / PTA
Ku soo dhowow Shirka Guddiga Dugsiyada Minnetonka! Danta isgaarsiinta furan, Dugsiga Degmada Minnetonka wuxuu jecelyahay inuu siiyo fursad ay dadwaynuhu kulahadlaan Gudiga Dugsiga. Fursaddaas waxaa lagu bixiyaa kulan kasta oo Guddi Dugsi oo caadi ah inta lagu jiro Faallooyinka Bulshada.
Tilmaamaha Faallooyinka Bulshada
Qof kasta oo muujinaya rabitaan ah inuu la hadlo an qodobka kujira ajandahan- marka laga reebo macluumaadka shaqsiyan tilmaamaya ama ku xadgudba xuquuqda asturnaanta shaqaalaha ama ardayda - inta lagu jiro Faallooyinka Bulshada waxaa qirayaa Guddoomiyaha Guddiga. Markii lagugu yeero inaad hadasho, fadlan sheeg magacaaga, cinwaankaaga iyo mawduucaaga. Dhammaan hadalada waa in lagu soo hagaajiyaa Gudiga guud ahaan, looma jeedin doono xubno gaar ah ama xubno aan xubin ka ahayn guddiga.
Haddii ay jiraan shaqsiyaad dhowr ah oo meesha jooga si ay uga wada hadlaan isla mowduuca, fadlan magacaw afhayeen hadalka soo koobi kara.
Fadlan ku koobnow faallooyinkaaga seddex daqiiqo. Waqti dheeri ah ayaa lagu bixin karaa go'aanka Guddoomiyaha Guddiga. Haddii aad qortay faallooyin, Guddigu wuxuu jeclaan lahaa inuu haysto nuqul, kaas oo ka caawin doona inay si fiican u fahmaan, u baaraan oo ay uga jawaabaan waxa aad ka welwelsan tahay.
Inta lagu gudajiray Faallooyinka Bulshada Guddiga iyo maamulku waxay dhagaystaan faallooyinka. Xubnaha guddiga ama Kormeeraha guud ayaa su'aalo kaa weydiin kara si loo helo faham buuxa oo ku saabsan welwelkaaga, soo-jeedintaada ama codsigaaga. Haddii ay jirto wax dabagal ah oo ku saabsan faalladaada ama soo-jeedintaada, waxaa kula soo xiriiri doona xubin ka tirsan Guddiga ama maamulka.
Fadlan la soco in faallooyinka ixtiraam darrada ah ama faallooyinka dabeecadda shaqsiyadeed, ee loola jeedo shaqsi ahaan magac ama tixgelin, aan la oggolaan doonin. Tabashooyinka shaqaalaha waa in lagu hagaajiyaa marka hore maamulaha, ka dibna loo gudbiyaa Agaasimaha Fulinta ee Shaqaalaha, ka dib Maamulaha iyo ugu dambeyn qoraal guddiga.
Ku soo dhowow Kal-fadhiga Daraasadda ee Guddiga Dugsiga Minnetonka! Danta isgaarsiinta furan, Dugsiga Degmada Minnetonka wuxuu jecelyahay inuu siiyo fursad ay dadwaynuhu kulahadlaan Gudiga Dugsiga. Fursaddaas waxaa lagu bixiyaa Kulan kasta oo Daraasad Guddi Dugsi ah inta lagu gudajiro Muwaadinka Galinta.
Tilmaamaha Wax Soo Gelinta Muwaadinka
Qof kasta oo muujinaya rabitaan ah inuu la hadlo shay kasta oo ku saabsan adeegyada waxbarashada - marka laga reebo macluumaadka shaqsiyan tilmaamaya ama ku xadgudbaya xuquuqda gaarka ah ee shaqaalaha ama ardayda - inta lagu guda jiro Soo-galinta Muwaadinka waxaa qiraya Guddoomiyaha Guddiga. Markii lagugu yeero inaad hadasho, fadlan sheeg magacaaga, cinwaankaaga iyo mawduucaaga. Dhammaan hadalada waa in lagu soo hagaajiyaa Gudiga guud ahaan, looma jeedin doono xubno gaar ah ama xubno aan xubin ka ahayn guddiga.
Inta lagu guda jiro Soo Galinta Muwaadiniinta Guddiga iyo maamulka waxay dhageystaan faallooyinka. Xubnaha guddiga ama Kormeeraha guud ayaa su'aalo kaa weydiin kara si loo helo faham buuxa oo ku saabsan welwelkaaga, soo-jeedintaada ama codsigaaga. Haddii ay jirto wax dabagal ah oo ku saabsan faalladaada ama soo-jeedintaada, waxaa kula soo xiriiri doona xubin ka tirsan Guddiga ama maamulka.
Xubin ka tirsan Golaha Dugsiga ayaa ka qayb gala kulan kasta oo PTA / PTO dugsi ah ugu yaraan hal mar sanadkii xubnuhuna way ku faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan shirar dheeri ah oo ay codsadaan hoggaanka PTA / PTO. Guddigu wuxuu ixtiraamayaa shaqada muhiimka ah iyo waqtiga kulanka ee looga baahan yahay PTA / PTO inay si wax ku ool ah u shaqeyso sidaas darteedna, waxay doorbideysaa in lagu casuumo shirarka PTO / PTA marka ay soo wacaan Guddiga Fulinta ee PTO / PTA.
Maamulayaasha Degmadu waxay ku faanaan inay aad u heli karaan ardayda, waalidiinta iyo xubnaha bulshada.
Cidda lala xiriirayo
Guddiga Dugsiga wuxuu u wakiishaa maamulka iyo maareynta Degmada kormeeraha guud.
Arimaha fasalka waa in marka hore lagu hagaajiyaa macalinka fasalka.
Arimaha iskuulka waa in marka hore loo hagaajiyaa maamulaha iskuulka.
Arimaha degmada waa in lagu hagaajiyaa maamulaha mas'uulka ka ah barnaamijka ama adeegga ku lug leh.
Hawlaha hawlgalka ama maaraynta waxaa si fiican loogu hagaajiyaa shaqaalaha iskuulka ama shaqaalaha Xarunta Adeegga Degmada ee ugu dhow meesha ay wax ka jiraan.
Haddii heerka koowaad ee isgaarsiintu uusan xallin arrinta, kormeeraha degdegga ah, maamulaha ama kormeeraha guud waa inuu noqdaa xiriirka xiga.